Izibikezelo Zokumaketha Okubikezelayo nge-ThinkVine | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 2, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kungaba yini ukubuya kwe-Investment uma ungashintsha inhlanganisela yakho yokumaketha?
Lo ngumbuzo amakhasimende amakhulu anamasu wokumaketha ayinkimbinkimbi (alinganiselayo phakathi kwenqwaba yabathakathi) azibuza wona nsuku zonke. Ngabe kufanele silahle umsakazo ku-inthanethi? Ingabe kufanele ngigudluze ukumaketha kuthelevishini ngiseshe? Uzoba yini umthelela ebhizinisini lami uma ngiqala ukumaketha online?
Imvamisa, impendulo iza ngamashumi amaningi wokuhlola nedola lokumaketha elahlekile. Kuze kube manje. Abakhangisi bebelokhu besebenzisa ukusebenza kwangaphambilini ukubikezela ukusebenza kokukhangisa okuzayo. Kunezingozi ezinkulu ezihambisana nalokhu njengoba kunezelwa izindlela ezintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ukushintshwa kwama-classifieds kusuka ephephandabeni kuya ku-inthanethi kuyisibonelo esisodwa nje esincane. Uma uqhubeka nokuchitha kwakho okuhlukanisiwe ngaphandle kokukuguqula ku-inthanethi, ubungeke ufinyelele kubukhulu obukhulu. Eqinisweni, ungahle umoshe imali yakho.
I-ThinkVine ubelokhu esebenza kuzimo ze- “What if” cishe iminyaka eyishumi. Amakhasimende abo ayamangalisa… Sunny Delight, SC Johnson, LegalZoom, Del Monte, Hershey, neCitrix Online.
I-ThinkVine iyakwazi ukwenza lokhu ngohlelo lokufometha olususelwa ku-ejenti olusungulwe empeleni ngawo-1940. Ngokuqonda izingxenye zemakethe ezithenge kuwe ngokusebenzisa into ngayinye nokusebenzisa imodeli ezingxenyeni ezikwezinye izixhumanisi, i-ThinkVine iyakwazi ukwakha imodeli yokubikezela ukuthi ukumaketha kwakho kuzosebenza kanjani kulabo abanye abasebenzisayo. Kuyindlela impela.
Izimo ezenziwa yi-ThinkVine zingasetshenziswa isikhathi eside, isikhathi esifushane sokumaketha okwenzeka ngezikhathi ezithile, kanye nemizamo yokukhangisa esekwe engxenyeni ethile. I-ThinkVine ingabikezela ngisho nesimo sokugcina… kuthiwani uma uyeka ukumaketha ngokuphelele!
Funda kabanzi ngokuthatha uhambo lomkhiqizo we-ThinkVine's Marketing Simulation and Planning Software.
Ukudalulwa okugcwele: I-CEO uDamon Ragusa nami sisebenze noBruce Taylor we Ukudumisa eminyakeni eminingi edlule ukusebenzisa izindlela ezifanayo ukuqondisa ukumaketha kweposi. UDamon wakha amamodeli wezibalo ashukumisayo avela kumaphrofayli wamakhasimende futhi, sisebenzisa i-automation kaBruce, sikwazi ukusebenzisa ngokuzenzakalela lawo amamodeli kulwazi olulindelekile. Isicelo sabizwa ngeProspector futhi sasebenza ngokugqamile. UBruce usihlelile kahle isicelo eminyakeni edlule futhi usasisebenzisa kumakhasimende amaningi amakhulu wokukhangisa aqondile.
Tags: ukuqagelai-analytics yokubikezelaukumaketha okubikezelayoumvini
Nov 3, 2009 ngo-3: 28 AM
Doug, hlobo luni lomlando wokuthenga i-ThinkVine edinga ukukwenza lokhu? Bangakwenza lokhu enkampanini entsha / yokuqalisa?
Nov 3, 2009 ngo-3: 57 PM
Ngokuqinisekile idinga idatha yomlando. Ngicabanga ukuthi uma benamakhasimende anele, amaphrofayili wokuhlanganisa kungenzeka. Akungabazeki ukuthi amaklayenti abo angakuthokozela lokho, noma kunjalo! Ngicabanga ukuthi basebenzisa okungenani unyaka ongu-1 wedatha - ngicabanga ukuthi kunconyiwe okungu-2.